Soosaarayaasha Mittens iyo Warshad - Soosaarayaasha Mittens Shiinaha
Napa xiiranaya maqaar ido maqaar ah
Mittens-kan ayaa ah mitten jiilaalka ugu fiican, gacmaha oo kululaada maalmaha ugu qabow. Ido Ido Shearling & Lepa maqaar. maqaar napa ah oo waara oo dhogor dhogor dabiici ah oo diiran oo dabiici ah. Waxaa laga sameeyay 100% merino maqaarka meerino, mid ka mid ah adduunyada dhogorta adhiga ugu fiican ee tayada fiican leh. Maqaarka idaha ee dabiiciga ahi waa jilicsan yahay oo fudud yahay, si layaableh diiran oo aan caadi ahayn u adkaysi badan, oo ku habboon socodka qaboobaha qabow ama fiidkii dambe oo lagu qaato dibadda. ● Qodobka maya: LM-010C ● Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ● Midab: madow, xaaq ...
classic 100% maqaarka dhogorta dhogorta dhogorta ah ee dhogorta leh oo leh dusha gudaha
Mashiinkaan loo qaabeeyey gudaha tollooyinka, tolida gaarka ah ee loo yaqaan 'tradtional stitchings', Cabbirka ayaa loo rogi karaa ama hoos loogu dhigi karaa si loo beddelo qaabka galoofyada. lagu sameeyay darajada ugufiican maqaarka idaha. jilicsan oo khafiif ah, si layaableh diiran oo si muuqata u adag, adkeysi leh hadana fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan mittens neefsasho. Waxay ku habboon tahay in gacmaha lagu kululeeyo socodka xilliga qaboobaha. ● Qodobka maya: LM-011C length Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ...
Maqaarka maqaarka lagu sameeyo ee gacmeed lagu garto oo leh astaamo iskutallaab ah
Classical iyo horyalka Talyaaniga. Naqshadeynta tolliinka iskutallaabta ah, habka dhaqameed ee gacmaha lagu tolo. Ku dhammee tolida tolida. Gaar ahaan, Cabbirka ayaa loo rogi karaa ama hoos loogu dhigi karaa si loo beddelo qaabka loo yaqaan 'mittens'. Waxaa laga sameeyay dabeecadaha maqaarka idaha, jilicsan iyo iftiinka, si la yaab leh diiran oo si muuqata u adag. waari kara hadana wali fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan mittens kuwo la neefsan karo. Ku habboon tahay in gacmaha la diiriyo socodka xilliga qaboobaha. ● Qodobka maya: LM-009C length Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ● Midab: madow, bunni iyo midabbo kale ● Waxaa jira afar si ...
100% maqaarka maqaarka idaha dhogorta dhabta ah
Ugu dambeyntiina mittens raaxo leh, oo lagu sameeyay darajada ugufiican maqaarka idaha. dabeecadaha maqaarka adhiga, jilicsan oo fudud, si layaableh diiran oo si muuqata u adag. waari kara hadana wali fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan mittens kuwo la neefsan karo. Waxay ku habboon tahay in gacmaha lagu kululeeyo socodka xilliga qaboobaha. Qodobka maya: LM-008C length Dhererka dhogorta waa qiyaastii 6-10mm .. ● Midab: madow, bunni iyo midabyo kale ● Waxaa jira afar cabbir.S / M 7, M / L 8 oo loogu talagalay dumarka. S / M 9, M / L 10 ragga.Qiyaasta loo habeeyay sidoo kale waa la soo dhaweynayaa. Q MOQ: 100 lammaane
Gacmo-gacmeed 100% gabdho lambskin dhab ah mittens la laastik ah
Moodo, Fudud, avant-garde, kalabar dhabarka galoofiska ayaa la rogay. Dhamaan dhogorta wan ee jilicsan ee adkeysiga leh gebi ahaanba waa la muujiyaa, Dadku ha fahmaan fahamka tayada ee lambskin-ka sidoo kale qurxin qurux ah.qurux ku samee gudaha gudaha.Same ka sameysan maqaarka adhiga ee 'merino real', kuwani waa kuwo aad u diirran oo waaraya laakiin haddana fiilooyinka dabiiciga ahi waxay ka dhigaan kuwan galoofyo neefsasho leh. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Xadhigeeda ayaa neefta, waxay u dhaqmeysaa sida jaangooyaha gudaha ee dabiiciga ah ee jirkaaga, kuwaas oo ku habboon socodka qaboobaha qabow ama fiidkii dambe ee lagu qaato banaanka.
Idaha gacanta lagu xiro ee mittens leh saddex dhibcood
Dhar gacmeedyo gacmeed gacmeed lagu farsameeyay oo loogu talagalay dumarka leh dhogor dhogor laga soo saaray
Maqaarka maqaarka adhiga ee caadiga ah